Semalt WordPress मा टिप्पणीको लागि एन्टी-स्प्याम समाधान प्रदान गर्दछ
तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटमा धेरै पाठकहरू पाउनको लागि कुनै पनि ब्लगरको सपना हो। यद्यपि तपाईको WordPress WordPress ब्लगमा तपाईले धेरै स्पाम टिप्पणीहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै विधिहरू र उपकरणहरू छन् जुन तपाईं WordPress मा स्पाम लड्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तल Semalt , Oliver King बाट प्रमुख विशेषज्ञ द्वारा निर्दिष्ट यी उपकरणहरू मध्ये केही छन्।
१. अकिस्मेट सक्रिय गर्नुहोस्
यो उपकरण एक वर्डप्रेस प्लगइन हो जुन आउँदछ जब यो पहिले नै पुनर्स्थापना गरिएको छ। WordPress को प्रयोग गर्ने कसैको लागि पनि तपाईले यो प्लगइन डाउनलोड गर्नु आवश्यक पर्दैन। यो प्यानलमा पहिले नै काम आयो, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको यसलाई सक्रिय गर्नुहोस्। सक्रियतामा, तपाईं एक एपीआई कुञ्जी प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईं ब्लगको धेरै पक्षहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अकिस्मेट प्लगइनले तपाईंको ब्लगमा सबै टिप्पणीहरू स्क्यान गर्दछ र फिल्टर गर्दछ जुन स्प्याम जस्तो देखिन्छ। अन्य समयमा, नियमित टिप्पणीहरू स्पाम फिल्टरमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ कि भनेर हेर्नको लागि स्प्याम टिप्पणीहरूको माध्यमबाट पार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
२. हनीपोट संरक्षण सक्षम गर्नुहोस्
एकले यस प्रविधि प्रयोग गरेर स्पाम बट्सलाई रोक्न सक्दछ। यसमा आफैलाई पहिचान गर्न ट्र्याकिंग स्प्याम बट्स समावेश छ। सर्वप्रथम, तपाईले WP स्प्याम फाइटर स्थापना गर्नु पर्छ। यहाँबाट तपाईले यो प्लगइन सक्रिय गर्नुपर्नेछ। सेटिंग्स मेनूबाट, हनीपोट संरक्षण सक्षम गर्न एक विकल्प छ। यस विकल्पले टिप्पणी क्षेत्रमा लुकेका फारम समावेश गर्दछ जुन केवल बट्सलाई मात्र देख्न सकिन्छ। स्प्याम बट्सले सबै खाली फाँटहरू भर्दछ, तिनीहरू आफै प्रि-एक्सपोन्टर गर्न सक्छन्।
Follow. "फलो टिप्पणी" लि comment्क प्रयोग नगर्नुहोस्
कहिलेकाँही, वेबसाइट मालिकले "कुनै टिप्पणी छैन" लि use्कहरू प्रयोग गर्दछ साइटलाई धेरै ट्राफिकमा संलग्न गराउनको लागि। नतिजाको रूपमा, यो मौकाले धेरै स्पाम टिप्पणीहरूलाई आकर्षित गर्दछ जसले टिप्पणीहरूमा स्प्यामलाई बढाउँदछ। केहि केसहरूमा, स्पाम पत्ता लगाउनको लागि उपकरणहरूले यो सामग्री फेला पार्न सक्दैनन्, जसले अवस्थालाई नराम्रो छोड्छ। केही विश्वसनीय प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको ब्लग पोष्टहरूमा पनि टिप्पणीहरू फेला पार्न सक्दछन्। यी स्प्याम टिप्पणीहरू फारम गर्न फिर्ता लि back्क हुन सक्छ। त्यहाँ केहि प्लगइनहरू छन् जसले टिप्पणीहरू मार्फत लिंकको रस साझेदारी गर्न सक्दछन्। जब तपाईं प्लगइनहरू प्रयोग गर्नुहुन्न जसले यो सामग्री साझा गर्दछ, तपाईं स्पाम टिप्पणीहरूका धेरै उदाहरणहरू हटाउन सक्नुहुनेछ।
Capt. क्याप्चा प्रमाणिकरण प्रयोग गर्दै
WordPress सँग प्लगइन WP-reCAPTCHA छ। यो प्लगइन एक सुविधा हो जसलाई यसलाई टिप्पणी सेक्सनमा सक्षम गर्न आवश्यक छ। क्याप्चाहरूले केहि ट्रिकहरू प्रयोग गर्दछ मानव ईन्टेलीजन्स टास्क (HIT) को आवश्यक छ जस्तै छविहरूलाई निश्चित मानक चीजको साथ क्लिक गर्ने। क्याप्चरसँग कम्प्युटर बोटबाट वास्तविक मानव छुट्याउने क्षमता हुन्छ। यी उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई टिप्पणी सबमिट गर्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ। तपाईं reCAPTCHA को प्रयोग गरेर स्पाम बटहरू रोक्न सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरूको टिप्पणीहरू रोक्नको लागि यो द्रुत र कुशल छ।
स्पाम कठोर र प्राय: जसो हुन सक्छ, यसले साइबर अपराधीहरूको कारण बिरामी मनसाय भएका मानिसहरूलाई हराउँदछ। केही अवस्थाहरूमा, सफल स्पाम आक्रमणहरूले वेबसाइटहरूको प्रशासन प्यानललाई हैकर्सको समूहमा पर्दाफाश गर्न सक्दछ जो उनीहरूको आवश्यकता अनुरूप केहि गर्न सक्दछ। यो भेद्यता एक तरिका हो जुन साइटले सबै चीज गुमाउन सक्छ। तपाईं माथीका उपकरणहरू प्रयोग गरेर स्पाम पत्ता लगाउन वा बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ। विधिहरूको लागि, स्प्याम सन्देशहरूलाई वेवास्ता गर्नाले तपाईंलाई धेरै बचत गर्न सक्दछ। एक स्प्याम बोटबाट वेबसाइट यूआरएल हटाउन र स्पाम टिप्पणी सम्बन्धी असंख्य कार्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ।